စပိန်နိုင်ငံရှိဇီဝလောင်စာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
ဇီဝလောင်စာသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်သာ။ ကြီးမြတ်အနာဂတ်နှင့်အလားအလာရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာအဲဒါကိုထုတ်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းတွေရှိတယ်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောအရင်းအမြစ်တွေ။ ဒါပေမဲ့၊ ငါတို့ဟာလိုချင်တဲ့အဆင့်နဲ့ဝေးနေတုန်းပဲ၊ အဘယ်ကြောင့်? ငါတို့ဘယ်မှာလဲ
ကံကောင်းတာကဇီဝလောင်စာဟာငါတို့ဒေသမှာပိုများလာပြီးအနာဂတ်ရှိတယ် အလွန်အလားအလာ။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ရှင်းပြထားသော AVEBIOM ဇီဝလောင်စာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမှအချက်အလက်များတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။
2 Observatoriobiomasa.es ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
2.1 ဇယား ၁ - စပိန်နိုင်ငံရှိဇီဝလောင်စာတပ်ဆင်မှုအရေအတွက်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း
2.2 ဇယား ၂ - စပိန်နိုင်ငံတွင်ခန့်မှန်းထားသောဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်တိုးတက်မှု (kW)
2.3 ဇယား ၃– စပိန်တွင်ထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်တိုးတက်မှု (GWh)
သို့သော်ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ပါ ၀ င်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဇီဝလောင်စာကိုအော်ဂဲနစ် (သို့) စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို ဒီတူညီတဲ့ကိစ္စ၏လောင်ကျွမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အသုံးပြုမှုကနေဆင်းသက်လာ။ သာမန်အားဖြင့်ဇီဝလောင်စာသည်သက်ရှိသတ္တဝါများမှဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့၏အကြွင်းအကျန်များနှင့်အကြွင်းအကျန်များမှထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းကိုအရွက်များ၊ သစ်သားအပျက်အစီးများ၊ အပျက်အစီးများစသည်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ရှင်းပြပါ၊ အကယ်၍ လယ်သမားသည်သူ၏သီးနှံအကြွင်းအကျန်များကိုအမြဲတမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်အမြဲတမ်းပြaနာဖြစ်ခဲ့လျှင်ဇီဝလောင်စာအသုံးပြုမှုသည်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံးကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်, ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်စက်မှုအဆင့်မှာ။ စွမ်းအင်အတွက်အသုံးပြုသောဇီဝလောင်စာမှထုတ်ကုန်များကိုဇီဝလောင်စာဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အပူ (လျှပ်စစ်နှင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်) သို့မဟုတ်အရည် (ဇီဝလောင်စာ) ဖြစ်နိုင်သည်။ လတ်တလောတွင်ဇီဝဒြပ်မှစွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်အပူထုတ်လုပ်စက်ရုံများမှအသွားအလာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအထိနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်တဆင့်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုပြသသည့်မတူညီသောဂရပ်များကြည့်ရှုမည် အဓိကအချက်များသုံးခု စွမ်းအင်ကဏ္၏ - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကီလိုဝပ်၊ GWh တွင်ထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအင်နှင့်တပ်ဆင်မှုအရေအတွက်။ အသုံးပြုသောအချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်ကဏ္inတွင်အထူးပြုဝဘ်ဖြစ်ပါသည်: www.observatoriobiomasa.es.
La ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင် Valorization များအတွက်စပိန်အသင်း (AVEBIOM) သည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ၂၀၁၆ တွင်ဖန်တီးခဲ့သည် ဇီဝလောင်စာဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ခန့်မှန်းချက်များကိုလူများနိုင်သမျှများများယူဆောင်လာရန်စပိန်နိုင်ငံတွင်အပူဇီဝလောင်စာအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအတူတူပင်ပလက်ဖောင်းတွင်စုစည်းရန်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
AVEBIOM ၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များနှင့်ဇီဝလောင်စာဘိုင်လာများဆိုင်ရာအမျိုးသားစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်ဇီဝလောင်စာစျေးညွှန်းကိန်းများအပြင်၊ ဇီဝလောင်စာကဏ္ in ရှိကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ပြောင်းလဲမှု, နှိုင်းယှဉ် generate နှင့်ဒေတာနှင့်ခန့်မှန်းချက်များကိုနိုင်ပါတယ်။
ဇယား ၁ - စပိန်နိုင်ငံရှိဇီဝလောင်စာတပ်ဆင်မှုအရေအတွက်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း
ဒီနည်းပညာ၏ကြီးထွားလာတဲ့ဥပမာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည် တပ်ဆင်၏နံပါတ်အတွက်တိုး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏ဤအမျိုးအစား၏။
နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စပိန်တွင်တပ်ဆင်မှုပေါင်း ၁၆၀,၀၃၆ ခုရှိခဲ့သည်။ ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှတ်တိုးလာသည်ဒီကိန်းဂဏန်းက ၁၂၇၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်က၊ ၁၀၀၀၀ တပ်ဆင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်၎င်းတို့သည် ၁၆၀,၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုနှင့်ဇီဝလောင်စာများတိုးပွားလာခြင်းမှာ သက်သေပြအချက်အလက်များ နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်။
ဤဘွိုင်လာများကိုဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်နှင့်နေအိမ်များနှင့်အဆောက်အ ဦး များတွင်အပူထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိသည်။ သူတို့ကစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်သုံးတယ် သဘာဝလောင်စာ သစ်သားလုံးလေးများ၊ သံလွင်တွင်းများ၊ သစ်တောအကြွင်းအကျန်များ၊ ၎င်းတို့ကိုအိမ်များနှင့်အဆောက်အ ဦး များ၌ရေပူရန်လည်းအသုံးပြုသည်။
ဇယား ၂ - စပိန်နိုင်ငံတွင်ခန့်မှန်းထားသောဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်တိုးတက်မှု (kW)
စုစုပေါင်းတပ်ဆင်ထားသောစပိန်အတွက်ခန့်မှန်းထားသည် 7.276.992 kW ကို 2015 ခုနှစ်တွင်။ ပြီးခဲ့သည့်ကာလနှင့်စုစုပေါင်းတပ်ဆင်ထားသောစွမ်းအားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၁.၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဘယ်မှာ kW ခန့်မှန်းခြေ6သန်းအောက်မှာရှိခဲ့သည်။
ပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းဤမက်ထရစ်ရှိဇီဝလောင်စာ၏အလေးချိန်တိုးလာသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်း နှစ်တွေ။
တိုးတက်မှုစုစုပေါင်းတပ်ဆင်ထားစွမ်းအင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြုံတွေ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ရရှိသောနောက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ ၃၈၁%၊ 1.510.022 kW ကနေ 7.200.000 ကျော်သွား။
ဇယား ၃– စပိန်တွင်ထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်တိုးတက်မှု (GWh)
အဆိုပါဂရပ်များနှင့်အတူအပြီးသတ်ဖို့ကျနော်တို့စဉ်အတွင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 8 စပိန်၌ဤစွမ်းအင်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စွမ်းအင်၏။
ယခင်မက်ထရစ်နှစ်ခုကဲ့သို့ပင်တိုးတက်မှုသည်နှစ်များအတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ရှိနေသည် အမြင့်ဆုံး GWh အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ 2015 GWh နှင့်အတူ 12.570 ခုနှစ်, ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထက် ၂၀.၂၄% ပိုများသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဇီဝလောင်စာမှထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်တိုးတက်မှုသည် ၃၁၈% ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏အဓိကစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များအကြားဇီဝလောင်စာကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းသည်အဆက်မပြတ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ဖို့ ၎င်း၏အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ရုံ 2008 ဒေတာကိုကြည့်ပါ။
ထိုအချိန်ကာလတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံပေါင်း 9.556 ရှိ၍ စွမ်းအင်ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၀၀၂.၃ GWh ဖြင့်စွမ်းအင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.002,3 Kw နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ရရှိနိုင်ဒေတာ, ထုတ်လုပ်ပြီးစွမ်းအင် 12.570 GWh, 160.036 တပ်ဆင်ထားနှင့်ခန့်မှန်းခြေစွမ်းအင် 7.276.992 Kw တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » စပိန်အတွက်ဇီဝလောင်စာ၏ဆင့်ကဲ